Ra’iisul Wasaaraha oo magacaabay Guddiga Badbaadinta iyo soo celinta Hantida Qaranka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 10 January 2019 10 January 2019
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa magacaabay Guddiga Badbaadinta iyo soo celinta Hantida Qaranka, kaddib wareegto ka soo baxday Xafiiskiisa.
Guddiga Badbaadinta iyo soo celinta Hantida Qaran ayaa ka kooban 11 xubnood oo isugu jira 8 Wasiir, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Hanti Dhowraha Guud iyo Xeer Ilaaliyaha Qaranka.
Guddigan ayaa la faray in la joojiyay bixinta iyo iibinta dhulalka dowladda, in aan la oran karin in laga maarmay dhul dowladeed, isla markaana hey’addii ka maaranta dhul dowladeed ay keento Golaha Wasiirada.
Sidoo kale waxaa la faray in aan la kireyn karin dhul dowladeed, iyadoo aan loo marin habraaca sharciga iyo in aan Gaadiidka dowladda la wareejin karin.